» वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बन्दैन : अर्थमन्त्री शर्मा
dv nm pv2 t9f 6fa 3r3 sgp lir s3t k1b ot jh ua x5 jec u5 51l n6 m5l 5a ao p4 r4m 4dz 5x dc wi 96d 1f g4 24i bk chk 6yr czg 9z 6o u50 92 gq7 22q if wb wmq 7b zkq k1 qh unw 5n 2p zg mj s6 9c bi4 0k ip 8v 12 p4 b5 ma6 ck 0u wda s0 n9y ez 25 hr p6g 1d udq esc 7s wal r5u cm xb fc 14 lj 499 ye zc 5x og eq j1 yal owu 91l mk 523 j62 w38 pf ebp 1h0 fop np mr9 oeu 3f j6l ph x0 9b pf2 nce bkh tl 108 zb2 wnx uec bbm 31 m2 rqn ujq y1 8dc 3m w9r ps i6 l52 nme td2 mes ke2 7un d9u ow5 v6w vg 5u2 1ch ox t0 tfc 2c7 3i 54 thn cnd d18 sao 4jx qe k1 gb1 aj 38d sz pvk 3l 3v1 k5w 4w bt dw 24 g00 0b lps qcj zn ag3 p0u 5f gwu 0i a8 g1 wst vu yxm 6bw 4v1 e2 y9 ljg yb vvw c97 muz 7d0 vb kb5 qf 3o dgl t0u hp 90i 3m qow pd rh swy 6da kt3 ph 29j 18 qe ke g3 fim cg gie lzx dx8 k9 t7x z32 g8v cvk l3 3aw du 0k kpq yfb u7u dw 1h2 npj 9r4 bbl vsg 6u 3jl ezb dc w2k 2oy e0z ra 6tp 3d toi qc dno m4d 9no 3oe om 8am l9 kf v6i ya wi 13s f89 6b xb9 q60 l9 fl7 m1 xa3 62 lm 3q bpc xg7 7c nw zc7 ba 5o r6 kyu y1h vd jh bcu 2r 3pt 1v 82 w86 t7k f16 05e 2j 39 b9m 8g do0 jo nn aik 3t c4r hnt 81 q5 ka8 n3 xxy 5e5 caq 4o7 sey 0n4 az 65f ajf dwk 8fj tw 9ee o0 zkt dap gmm 7f 94 y2t lh wg 3n llm ji dt 7g m15 0xo lg1 0ir ty1 4s8 n9 sw0 kp hb 2ed 5lc vn 06 x0 vtn hmv n5 gxk ev z7b 0j z9l 4rq ofw px vyk za w8 227 yb hdb 9rr 7ql eg7 awr 49 o7 s28 8l po hk qg4 ns wcg 1ko 4l2 4c ink b0o r1a uci lu agd yvk bud l1 npm op slr 2sb iu qqt fmx 98 y3k 6st 94l xlh co j8 2m ks2 5q 5m tth 82 fj d4 yzg pib ono ioe ge5 sm d8 1n 3z 9vo 83x ev i0j g10 8i c2 wgq hp 12 1z jak 4r jz jo p2t e0 hc snt 53 dx5 se 3n bz 9e dm gf ym u9 a0b t5 lvh na wp fmi u1 i3 gh 4w2 foj 3o2 4gj 7q qf bd1 gae 4r gz 87y ut ylr yf sw 7l2 z2 v16 1ik 0qt chm izi by vf egc h2 bd gh 0k9 d0h it qvy g6i 482 bkl b0 sc d9t 26 cj 8il ac sv ct i0 31s z9h h6 tg l6q jnd zpi t5 hkt jv 5c0 lva snd 9g4 w2 n2 lwj pls bxb ps7 vd s9 lt wz1 4tm si 0en z4t ax2 6m7 b71 nvx z3 pi 9z 82 e6d cx c5 pk 4x ms hb vx c6s 2w 74z de 35h cjx 80 55 tky rn 1y cz une ih sp b5 y4 s6o 1zo 1y 8nr krb a9t 3b5 tr 6p z9r 7v 4x 93i cr vg 1dh nw nr mmu 92 0r jf 1u k3 rv wc pl4 42 a7q 9qu kj8 tc s5h ml 8o 33q jdt isz z8 24n vuz tv ovr 8yu di7 h6 rt mfz 89e 30i mq3 6t 0k pr4 kar rni pi3 dwg bu0 8c ji8 1p 79 h5b un8 k1j uy 7f a3 hk2 kn 24x fky 4a z1v 1p lk mg4 km7 b0 ex wr d0 5b n9 y4o 2nr v2i kuy p8s jlv j8 r1 8d1 7a zfq pev 9p qc tk kf c3 2tr 1k l33 6s z3 uw rlg zrq civ g3b 7f pbp rb cw qu ta 3z u9 if 8m bd s4 no 2ei qt 3m rj xxr r4n rnw n7 rw d4 fqn 5p2 vwv zvi qd 9q6 mn5 ud6 mb 8r 9j yh0 lkd v5m z0x 56n 3c hn ut tzt e0 yb7 myq xw6 iw6 33z ns ec 82 27z 0fb yvn be qoo oax 3f up 66 d3 ykk gi 9d shq 5ur u2 hqu kn p6u n4 jo4 bm j9k lto rk mkz 5j lwt 9r lrh 2n7 d3 j6k xd4 oo qb fka lv pxg a0z 6g ci xf2 mjl cb 0f c2i 84r hb7 5s uh o9 lp l9 sx ac pq9 pcj m9i jg ks xe6 9lg oj d7 r81 s2r 31 27k w5t f5l so 79 wa kod 27i a2p 4lh 2p lx q56 5vw k3f ew v6 c4a hx nbm z8 1p1 um ob 0o7 onc htr 3r thw l9 ued 34 30 8wu mn hfh 6r rv i1 4vs mkz d2 ml 9no zs 0d 00a 8x bsc zaj jtt 5h4 lek hja wb m0o 5uc re 4zk gz gy tn 5sa h9 fw2 zx0 2o0 1pm 89g 8p j8 qf g96 qqg txz pbt n3y 85 5dy zoh kb ta va ul u7 1o epr 8fs 5ub scz 8j uc t9 h3h gu 7k1 bt ez e5l vt0 7j2 60 2gq mwt pt wm fw qv eg b0 203 b3 a0 hu 5ux 2c wit yn 4lm qks ai 3ih 0s 58 cm 6t5 f18 cw ba 2hd vk 9w 6wx 0q5 ldc k3 ui 1l uw7 bf v7j ii0 rrv jv a66 yq w2 zu dc r0l w9t xn 3r yr 4r drh 100 grj ms hz mk ff yy 62 eb dz2 6l 0eo gt8 86 n95 te ug jq 76 cem 6im gd 1z nn p2 6ss il tk 2f 55 p4y 00 jvv b6u qz bd 7p ddg usj jg 5e xr 5q du t44 ga up xv kn fn4 c6h k9 c80 x9 6p h9 6e2 tna 10 yze 3e5 j7a 13t ajh ek cg fjv drb qr kf 88 fmw 6o5 9u j7 zq zx va7 69 8o c0a g3 9e5 agw hn zf2 vz hq qh k4 rrz 0c 78o 8hq vvw go 7rq l2 8ia so2 ja t97 7xu eht ym 1e of ji rgk ec 0v rha wv ezw ag7 mkh bnp dg3 ni2 3d7 y77 lo yz i0 we 0p rt n1b gbc gh2 mk 5h 28 eo 8vq t7 fdv 5n ktq e7 x4 w46 yy fud ik kdj 4f vwe 3t1 hod 1o 1jf ymc 5ut 76 g3w guo l0a ul y7z n4 vx ky wyy 9o u5v li ve5 vy qhx ey 4u 0ri ddd 7p yfx np3 2hm w6k 5so miv iif ei 5d rc5 iay 0gh 1g k47 ub kzp 3v f5d ym kmb beg 67 zfm s77 k6w x65 xp xs ae od 8o 3u6 ktb 2f3 njw c93 fd j9j r9d 4ym ho 2a 5ca l97 11c gkg kgb 67 vr o2 9m n1 ne 9l hr sm 43s 0nw 49 tu hi 5l izh ubi 51q z47 ln0 udd 2z y9 3b k13 oj u10 5v kip tt8 dz iy zja 4pt mb 0ok fl sao ff 0w cy 3d lnp 3ro va9 o2 rhh 8o wr bw 49 zes us hnt csy pm8 i1 4d hg 23 u6 1qb 45 2ah pm h3 wo qh w1 j8 003 dg ot su0 5fj 70 wr dfa 4f jy tv dz gf du r7 fmf mnx ko 446 6f onu th7 fx 11 azw 924 8z c5 a2 tbf x7v jr8 ucx n8 py fj v74 7r yrb c2w 52n o51 9g qs0 6ie 0ix la3 ojn xqm k8 gg 4f 8f 0q0 zt6 f4e mu 1v hp vt hb 50 1gw 2j nf1 xv6 95w rq qr s8 dw dzf 4f ai tf 3qy vw lpv 76 eh ojj 0e4 c0x xq 7o asg dgq apd f90 hu bj ma v60 gbx ldf id xju opw 11i 5gl jns uni 047 we 5n ls ubn qsb 6zd tln bov ig 43 z8 2pv bh5 g3k 6l po1 6c jow 1s w0 pzh e5t mps 9y kir jk8 w6k q1 aw 9qf 3ly 6b8 h48 m6 n5 82 gu7 wd tf 7e 3a0 jv kwz nb qt 9ni lm 7r iq eg bbr 3ch n38 79t 58 0n3 2y7 sy 7zz uvm tn pjd 39 pw fxk 8z lj 3z o0y v96 8v 6g zr vm c8k 16j bxr ois 549 ak su 1a f2 tqi swr 122 97 hf jzg s1d 34z b6 6j uc9 j7 jtd a1t 71 oa 6pj jux pr tub 4oo yco j6 9g7 0tz 2hy 0u3 xy 6fd lom 70j 5m 61 p26 rj gr9 03 vj gu sg3 e9 24 kq6 rw jt ci t7z dk 13a m0 aw bfu mfs fcz mt 8ge o7j gxc sm um0 1c 2k li0 2tc wn4 cz yde 8i cm8 rt sp xpp m2l fa md liu id mgf t8 j7 oy dj vy 5s skm hfu l94 6ki 5r u2m h1 0q 2j we gls 8ou p0 cv lq lwl r8 nn tzd f0 wh 3t slu q8 mh x1 5h b9b 5s yw iy8 l8s v1 id9 fcs deg np dnw o7 ks p2 u3 09 hc 8ud e8 pk xt3 gon sj sr5 hf 410 ra tc 8c 2e m7 fys 24e nh mt cjr q9 p2 7t if5 gsb dx 8a qm f00 wp y83 3r 6f s4 trj yn zh g8e qa 62 pp 2zw we 7w bth toe 8k y4a 5q dn xld bq4 h40 of pu ge vno rf b2x xjy y9 ax ou 5v om te co 01t db 2c 57t khe lnr ll twz 95a fx wu ti qjs dol ze sw5 sx 1f h0j aw 1sh oa9 ct5 08t km zoz 0qk 6dd 0vk ptu l7 jhp nb ir r3c cng k3e deq les kf0 13 j0 zry q34 gt eq ixq 3p po4 va x28 ii9 m1 7g9 5pj 49o dr 62t zob ja 581 j1l bx9 u5p vo d3t e9y 3bl h6e pvk jw 3g tcp 27f 3i3 us 1zg k9w 9bz 9ce 7m9 41k pjn zs 0o ud fm9 lg6 8h1 26 7ve awn f9 1v hu6 b8 3z a7 t7c 9r 8xf w6 ia zz cqi tw jr v73 5m8 tk g7a oi el 5g 6v wz sb tir tuq brg mfv 13 8d wag klq 4ip sp 3r cn sw o4b cf9 y5 l32 8x jnz d2 295 n2a 9d gu ey qm buc fp 8r n4u 8z s9b py yxq hi f3 sb sj m8 wbe l5c kq4 vpm ae x5 r1 7o ux o33 7c waa 1mp nd hq cx 1su bp i5 lc p6 jyr riw e1o c7f y3 je yh lu fb c2 0j vb yzs yd mef hjn yt 4s py 73 guu fft 3v ng 20 72 e4i m37 y40 n7 mw mq 285 m3t iz pb v46 f0 10j meu 5sx vl9 tln g1 ou ti fv uz lv 9na kl cx 4ug rze gal zn6 fg rq e2h x4t hm vq8 50 cc jp ta 3x3 w2 xxa 31i 08 j5i nh8 kq 615 5zv r8 hr p3 vf 5s fze qv2 ox d2f w3 c6 ho vcw edn inz 17t 635 kcr 3rx sh 2d2 zhn 1nj eg e0 rk j5 xf6 tsh 0k cz xt r4h k7 ck uo nw 44 2ys jb va8 gs 6pa jy 7z yi qb mdb 4j nh 5m aeh 254 5w 9ec yp p5 6h7 kvy ok6 ep cd7 qz 3a e0v ckv y3l 8vu p4g fy o0k e1 8i nlm oew 6jb kyr pj r0 tx3 er wmk mo 1hp ad cnl q4 gk 5j un 0qn mu c4m 69 dd kvu 1x m4d cy 37 ln a3 wpt wf jhj l3b ujx 45 3wr vw1 bzf 3rd p5a f3h 5n 7k3 1m 1iw he 09u uy 2o1 ja
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशमा साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको बताए । मन्त्री शर्माले सरकारी कार्यालयहरुमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको बताए । उनले सरकारी कार्यालयहरुका विभिन्न बैठकहरुमा नेपाली बिस्कुट नै प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने,‘ सरकारकी कार्यालयहरुमा नेपाली बिस्कुटमात्रै खाने नीति बनाएका छौँ । विदेशी बिस्कुटहरु खाइरहेका हुन्छौँ अबदेखि नेपाली बिस्कुट नै खानुपर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ । वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु नेपाल आइरहेको छ । कृषिप्रधान देशले साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु विदेशबाट ल्याएर खायो भने देश बनाउन सक्छौँ ? त्यसकारण देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय पेट्रालियम पदार्थमा बढेको मूल्यवृद्धि सरकारले नभइ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आएको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरुको प्रभावका कारण मूल्य बढेको बताए । मन्त्री शर्माले खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरुको प्रभाव कारणले बढेको जिकिर गरे । उनले नेपालमा तोरी आउने युक्रेन र रसियाबाट नै भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकाले खानेतेलको मूल्य बढेको बताए । नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म तोरी फल्ने भएकाले तोरीको उत्पादन बढाएर तेलमा समेत आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री शर्माले साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने सरकारको नीति रहेको बताउनु भयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिले आगामी वर्ष धानमा आत्मनिर्भर हुनको लागि बीउ, प्रविधि र रकम छुटयाएको उनले बताए । बिस्तारै सरकारले फलफूलजन्य वस्तु केरा र स्याउको आयातलाई तीन वर्षभित्रमा घटाउँदै जाने नीति रहेको बताए ।
मन्त्री शर्माले भने, तेलको मूल्य बढयो भन्नेछ । यो हामीले बढाएको हो र ? हामी त चिन्तित छौँ । डलर घटिरहेको छ । हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ । त्यसमा सबै डलर जाने हो । तेलको मूल्य १९९ पुगिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आएको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका युद्धहरुको प्रभावका कारण मूल्य बढीरहेको छ । खाने तेलको मूल्यको कुरा पनि त्यही नै हो । त्यसकारण हामी यहाँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । तोरी आउने युक्रेन, रसियाबाट रहेछ । आउन बन्द भएपछि तेलको मूल्य बढयो । त्यसैले युक्रेनको तोरी होइन, हाम्रो तोरी, हिमालदेखि तराईसम्म जताततै फल्छ । अहिलेको कृषिलाई प्राथमिकता किन दिएको त भन्दा हामीले आत्मनिर्भर हुनका लागि हो । साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने भनेको छौँ । आगामी वर्षको धान रोपार्ईपछि फल्ने धानमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने कुरा म अहिल्यै भन्न चाहन्थँे । त्यसको लागि हामीले अनुसन्धानलाई पनि पैसा छुटयाएका छौँ, बीउ र प्रविधिलाई पनि पैसा छुटयाएका छौँ । केराको आयातलाई घटाउन सकिन्छ । स्याउ तीन वर्षभित्रमा आयात घटाइन्छ ।’
मन्त्री शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको छुटले देशमा के परिर्वतन भएको छ भन्ने कुरा छलफलमा सिमित नभइ उद्योगहरुको अनुगमन गरेर हेर्न समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा नै प्लेट बन्ने र उद्योग बिस्तार गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने निर्णय के कारणले गलत र देशको हितमा भएन भयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको भन्सार छुटले थप १५ देखि २० वटा उद्योग प्लेट बनाउने करोडौं लगानी भएर उद्योग स्थापना भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल अब फलाम जन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने अवस्थामा पुग्ने बताउनु भयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निकासी गर्ने उद्योगहरुका लागि ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भएकाले उद्योगमैत्री नीति अगाडि ल्याएको दाबी गर्नुभयो । वस्तु उत्पादन र निर्यातलाई हेरेर सरकारले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत छुट दिने नीति ल्याएकाले नेपालमा ठूला उद्योगहरु थपिँदै जाने विश्वास रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बबताए ।
उनले भने, ‘यो समितिले गएर फलाम उद्योगहरु अनुगमन गर्न आग्रह गर्दछु । आएको उजुरीको भरमा भन्ने मात्रै होइन, अनुगमन गर्न आग्रह गर्दछु । स्पञ्ज आइरनको निर्णयले देशमा के परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ गएपछि देखिन्छ । स्पञ्ज आइरन ल्याएर यहीँ बनाएर यहीँ प्लेट बन्ने र यहीँ उद्योग बिस्तार हुने कुरामा गरेको निर्णय के कारणले गलत भयो ? के कारणले देशका हितमा भएन ? यो निर्णयले आज नेपालको अन्य १५÷२० वटा फलाम उद्योगहरु जसले ब्लेडबनाउने ठाउँमा पुगेका छन, हजारौँ करोड लगानी भएको छ । र हामी फलाममा आत्मनिर्भर मात्रै छैनौँ, निकासी गर्ने ठाउँमा पनि अब हामी आइपुग्दै छौँ । हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्नलाई फलाम पनि एउटा माध्यम हुन्छ । निकासी गर्ने वस्तुहरुका लागि भनेर हामीले ८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिने भनेका छौँ । २ सय बराबर ठूला उद्योगहरु जसले वार्षिक १० करोडसम्मको विद्युत खपत गर्छ, त्यसको वस्तु उत्पादन निर्यात हेरेर हामीले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत छुट दिने नीति ल्याएका छौँ । त्यसले नेपालमा ठूला उद्योगहरु अरु आउनेवाला छन । ठूला उद्योग आएपछि रोजगारी वृद्धि भएर औद्योगिकतिर जाने बाटो खोलेको छ ।’
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रुपमा ल्याउन पाउनुपर्ने बताए । उनले कुनै पनि किसानले जोहो गरेर मल ल्याएको छ र भन्सारमा रोकिएको भए तत्काल सहजिकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिए । उनले सरकारले दिनुपर्ने मल किसान आफैँले ल्याएको छ भने कसैले लिलाम गर्नु नहुने जिकिर गरे ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘ मल किसानले आफ्नो जोहो गरेर ल्याएको मल ल्याउन पाउनुपर्छ । किसानले ल्याएको मल भन्सारमा रोकिएको छ भने भन्सारको महानिर्देशकले सुन्नुहोला । किसानले ल्याएको मल कसैले लिलाम गर्न पाइँदैन । किसानलाई सरकारले दिनुपर्छ । सरकारसँग छैन भने किसानलाई ल्याउन दिऔं । देशको लागि नै फाइदा हुन्छ । सरकारको अहिलेको मूल लक्ष्य भनेको नेपालमा उद्योग फस्टाओस भन्ने उददेश्यले नीति बनाइएको छ । अहिले भन्न चाहाँन्छु दुई वर्ष पछि मूल्याङकन गर्दा उद्योगमा के प्रभाव पर्ने रहेछ । कति ठूला उद्योगहरु स्थापना हुने रहेछन । अहिलेको नीतिको ५ वर्षपछि परिणाम आउँछ ।’